एक्लो कागजातमा छड्के-सन्दर्भहरूले तपाईँलाई निश्चित पाठ अध्याय र वस्तुहरूमा जान अनुमति दिन्छ । छड्के-सन्दर्भले निशाना र सन्दर्भ समावेश गर्दछ जुन फाँटहरू कागजातमा घुसाइएको छ ।
क्याप्सन र पुस्तकचिनोहरू सँग वस्तुहरू लक्ष्यको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तपाईँले छड्के-सन्दर्भ घुसाउन सक्नुभन्दा अगाडि, तपाईँले पहिला तपाईँको पाठमा निशानाहरू निश्चित गर्नुपर्नेछ ।
छड्के-सन्दर्भका लागि लक्ष्य प्रयोग गर्न पाठ चयन गर्नुहोस् ।
घुसाउनुहोस् - छड्के-सन्दर्भ रोज्नुहोस् ।
प्रकार सूचीमा, "सन्दर्भ सेट गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस् ।
निशानाका लागिनाम बाकसमा नाम टाइप गर्नुहोस् । मान बाकसमा चयन गरिएको पाठ प्रदर्शन हुन्छ ।
घुसाउनुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। लक्ष्यको नाम चयन सूचीमा थपिएको छ।
संवाद खुला छोड्नुहोस् र अर्को सेक्सनमा जानुहोस् ।
लक्ष्यमा छड्के-सन्दर्भ सिर्जना गर्न:
प्रकार सूचीमा, "सन्दर्भ घुसाउनुहोस्" चयन गर्नुहोस् ।
चयन सूचीमा, निशाना चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ छड्के-सन्दर्भ गर्न चाहनुहुन्छ.
ढाँचा सूचीमा, छड्के-सन्दर्भका लागि ढाँचा चयन गर्नुहोस् । ढाँचा सूचनाको प्रकार निश्चित गर्दछ जुन छड्के-सन्दर्भको रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, "सन्दर्भ" निशाना पाठ घुसाउनुहोस्, र " पृष्ठ" पृष्ठ सङ्ख्या घुसाउनुहोस् जहाँ निशाना अवस्थित भएको छ ।
समाप्त भएपछि बन्द गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।
छड्के-सान्दर्भिक एउटा वस्तु
तपाईँ तपाईँको कागजातमा प्राय वस्तुहरू छड्के-सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ग्राफिक्स, चित्राङ्कन वस्तुहरू, OLE वस्तुहरू, र तालिकाहरू, लामो समयसम्म जब तिनीहरू सँग क्याप्सन छ. वस्तुमा क्याप्सन थप गर्नका लागि, वस्तु चयन गर्नुहोस्, र घुसाउनुहोस् - क्याप्सनछनोट गर्नुहोस् ।
कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ छड्के-सन्दर्श घुसाउन चाहनुहुन्छ ।
प्रकार सूचीमा, वस्तुको क्याप्सन कोटि चयन गर्नुहोस् ।
चयन सूचीमा, वस्तुको क्याप्सन सङ्ख्या चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ छड्के-सन्दर्भ चाहनुहुन्छ ।
ढाँचा सूचीमा, छड्के-सन्दर्भको ढाँचा चयन गर्नुहोस् । ढाँचा सूचनाको प्रकार निश्चित गर्दछ जुन छड्के-सन्दर्भको रूपमा प्रदर्शन भएको छ । उदाहरणका लागि, "सन्दर्भ" क्याप्सन कोटि घुसाउनुहोस् र वस्तुको क्याप्सन पाठ ।
छड्के-सन्दर्भहरू अद्यावधिक गर्दा
Title is: छड्के-सन्दर्भहरू घुसाउँदा